Qoyska Magefe oo xog cusub oo xasaasi bixiyey - Caasimada Online
Home Warar Qoyska Magefe oo xog cusub oo xasaasi bixiyey
Qoyska Magefe oo xog cusub oo xasaasi bixiyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan xaalladda uu ku sugan yahay Ninka sida weyn loogu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyo Afduubka iyo Madax Furashadda loo geysto Tahriibayaasha ka soo gudba Lama-degaanka Libya.
Ninkaasi oo lagu magacaabo Salah Maskhout, balse ay Soomalida u yaqaanaan Magefe ayaa waxay Warbaahinta shaaciyeen in Jimcihii lagu dilay Toogasho ka dhacday duleedka magaalladda Tripoli.
Wiil uu adeer u yahay Magefe ayaa beeniyey in la dilay Adeerkiisa, wuxuuna beeniyey inuu ku lug leeyahay Falalka Afduubka iyo Tahriibka, waa sida uu hadalka u yiri.
Rawad Maskhout waxa uu sheegay inuu Adeerkiisa nool yahay, kuna sugan yahay Degmadda Zuwara.
“Adeerkay Saleh Maskhout, waxa uu u shaqeeyaa Shirkad ku taalla Degmadda Zuwara”ayuu yiri Rawad Maskhout oo la hadlay Wargeyska The Libya Herald.
Nin kale oo qaraabo la ah Me-gefe ayaa isagana sheegay inuu Adeerkiisa yahay nin Badeecadaha soo dejiya (Importer) isla markaana uu ku sugnaa dalka Tunisa.
Wargeyska The Libya Herald ayaa qoray inay ilo badan oo ku sugan Degmadda Zuwara u xaqiijiyeen in Ninka la dilay ay magac ahaan wadaagaan Magefaha Rasmiga ee madax-furashadda ka qaata Tahriibayaasha.
Wargeyska waxa uu Salah Maskhout raalli-gelin ka siiyeen inay isaga ku xiririiriyeen shilka lagu dilay Hoggaamiye ka tirsan Kooxaha dadka ka tahriibiya Libya.
Dhinaca kale, Saraakiil ka tirsan Wasaaradaha Arrimaha Dibedda iyo Gaashaandhiga ee Talyaaniga ayaa si kulul u beeniyey inay Sirdoonka Talyaaniga ku lug lahaayeen dilka ka dhacay duleedka caasimadda dalka Libya ee Tripoli.
Si kastaba ha ahaatee, dilka Magefe ayaa ku soo beegmay iyadoo ay o magaalladda Muqdisho ka hawl-galaan Shirkado la shaqeysta Ma-gefe, kuwaasi oo dadka Tahriibka ka qaada ilaa 5,000 oo Dollar, si ay uga badbaadaan Magefaha caanka ka ah Lama-degaanka Libya.
Xigasho: The Libya Herald.